Home Wararka Nure Afyare: “Hadii Farmaajo garan waayay in uu casilo dadkii ka danbeeyay...
Nure Afyare: “Hadii Farmaajo garan waayay in uu casilo dadkii ka danbeeyay fashilka Amniga ee Muqadishu, war idinka is casil”
Nure Afyareoo ka mid dadkii ku dhaawacmay qaraxii xalay ka dhcay magaalada Muqadishu kuna jira mid ka mida Isbitaalada Muqadishu ayaa u sheegay wariyaha MOL in uu wiil ay walaale ahaayeen uu ku dhintay qaraxii xalay halka uu isaguna ku dhawaac soo gaaray.
Wiilka oo ay hoyadii la joogtay marka uu la hadlayay MOL ayaa ku eedeyay MW Farmaajo in uu mas’uul ka yahay dhibkii ka dhacay wadada Makkah Al Mukaramah. Waxa uu yiri “Hadii Farmaajo garan waayay in uu casilo dadkii ka danbeeyay fashilka Amniga ee Muqadishu, war adiga is casil”. Waxa uu intaas ku daray “ Walaahi kama sugaayi Farmaajo caqli iyo dadnimo uu talaabo uga qaado Fahad Yasin iyo Wasiir Ducaale iyo RW Kheyre laakiin waxaa islahaa kuwa lagu aaminay amniga umaadda ayaa damiirtooda ku qasbeysaa in ay iyagu iscasilaan”.
Dad badan aya qaba in dhibkii xalay ka dhacay Muqadishu uusan ahaan doonin kii ugu danbeeyay inta Hogaanka Aminga iyo kii dalkaba uu gacanta ugu jiro dad aan qaadi karin mas’uuliyadda loo igmaday. Shaki kuma jiri in qarax kale ka dhici doono Muqadishu oo dad masaakin ah lagu layn doono inta Farmaajo uu dalka hogaankiisa hayo.
Waxaa wali laga maqlayaa rasaas goobtii xalay uu qaraxa ka dhacay iyada oo aan wali la soo afjarin howlgaladii lagula dagaalamayay kooxdii ka dabeeysay qaraxii xalay.